Global Voices teny Malagasy » Nigeria: Tonga ao Lagos ny tariby vaovao avy any anaty ranomasina ho an’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Septambra 2009 7:23 GMT 1	 · Mpanoratra Rebekah Heacock Nandika miora
Sokajy: Kamerona, Nizeria, Teknolojia
Mahaliana ireo mpitoraka blaogy any Afrika Andrefana ny fahatongavan'ny tariby ambany ranomasina GLO-1  any Lagos tamin'iny herinandro iny. Mampifandray an'i Nigeria sy firenena 13 hafa any Afrika Andrefana ny GLO-1 amin'ny fotodrafitrasam-pifandraisana mandalo any Eropa, izay mitondra fatranonja [bandwidth] vaovao midadasika ho an'ny faritra.
Sarintany mandalo ny Many Possibilities .
Tamin'ny faramparan'ny volana Jolay, ny fahasimban'ny tariby SAT-3  — izay hatramin'ny herinandro lasa dia izy irery no làlana nahafahan'i Nigeria nifanerasera tamin'ny tambajotra maneran-tany— dia niantraika  tamin'ny asan'ny banky sy ny fidirana amin'ny aterineto manerana ny firenena iray manontolo. Eo amin'ny 70 isan-jato n'ny fatranonja ampiasain'ny firenena no voadona.
Raha ny voalazan'ny  lehiben'ny Globacom Limited, izay namatsy ara-bola ny GLO-1, ilay fotodrafitrasa vaovao dia afaka miatrika izay filàna fatranonja rehetra any Nigeria ho an'ny 15 hatramin'ny 20 taona ho avy. Miandrandra ny sanda mora kokoa sy manara-penitra ary hafainganam-pandeha malaky ireo mpitoraka blaogy.
Avy any Cameroon, manoratra i Bill Zimmerman  :
Ho an'i Yomi Adegboye ao amin'ny Mobility Nigeria , tsy mbola ato ho ato no ho tonga ireo fampanantenan'ny GLO-1:
Tsy manam-paharoa ny GLO-1 amin'ny maha-tariby anaty ranomasina voalohany indrindra eran-tany azy fehezin'ny tombontsoan'ny tsy miankina. Theresa Carpenter Sondjo ao amin'ny Appfrica  dia manazava:
Munashe Gumbonzvanda ao amin'ny TechMasai  dia manampy:
Ny zava-mahaliana amin'ity tariby ity dia tsy toy ny ventures hafa sahala amin'ny Seacom  [fanamarihana avy amin'ny mpanoratra: Seacom, tariby izay mampifandray an'i Afrika atsinanana amin'i Eropa sy Asia, nanomboka niasa tamin'ny  Jolay 2009], fa ity dia famatsiana manontolo avy amin'ny Glo samirery. Goavana ny ho fiantraikan'ny Glo-1, nefa mety ho elaela vao ho hita taratra.. Toy ny tamin'ny Seacom, fotoana lehibe ho an'ny fiavaozana ara-teknolojika Afrikana sy ny fandrosoana izy ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/09/15/3403/
 tariby ambany ranomasina : http://www.vanguardngr.com/2009/09/06/glo-1-submarine-cable-lands-in-lagos/
 ny fahasimban'ny tariby SAT-3: http://opennet.net/blog/2009/07/damaged-cable-causes-internet-blackout-four-west-african-countries
 dia niantraika: http://www.thisdayonline.com/nview.php?id=150076
 70 isan-jato: http://www.thisdayonline.com/nview.php?id=149978
 Raha ny voalazan'ny: http://www.thisdayonline.com/nview.php?id=153634
 nanomboka niasa tamin'ny: https://globalvoicesonline.org/2009/07/24/africa-the-arrival-of-seacom-cable-sparks-debate/